Ụbọchị My Pet » Uru na ọghọm mkpakọrịta nwoke na nwaanyị a Nta Nwanyị
Uru na ọghọm mkpakọrịta nwoke na nwaanyị a Nta Nwanyị
A na-adịbeghị anya nnyocha e mere na na-egosi na ndị ikom irrespective ọgbọ ha chọrọ ka ụbọchị ndị inyom ha na ufọt ufọt 20s. Ọ bụrụ na nchọpụta nke nnyocha e mere na na-na-kweere, ọbụna ndị okenye nọ na ha 40s, 50s, ma ọ bụ 60s-ahọrọ ụbọchị inyom ukwuu tọrọ ha.
E nwere oge mgbe Society ekweghị mmekọrịta n'etiti ndị okenye na ndị tọrọ inyom; Otú ọ dị, ugbu a, ihe agbanwewo budata na mmekọrịta dị otú ahụ na-mara mma nkịtị. Ezie na ihe nile banyere mmekọrịta dị otú ahụ adịghị mma, ha na-adịghị kpamkpam ọjọọ ma. Nneme n'okpuru explores ụfọdụ uru na ọghọm nke akpa ụmụ agbọghọ.
Nta inyom, ruru ha afọ, na-emekarị na-abịa na-erughị obi akpa. Ụmụ nwanyị meworo okenye, n'akụkụ aka nke ọzọ, mgbe ida ha adụ amara dị ka a n'ihi nke emume ọzọ lee njem na ndụ. Okenye anya n'ihi na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mmekọ ndị nwere ike nwee ume ha na-si otú adịkarịghị mmasị ndị inyom bụ ndị na-n'ụzọ mmetụta uche na-ebogbu.
Dị ka ndị na-eto eto ochie, ha na-agbasaghị na-erughị adventurous. Nke a na-eme ka ha anya tọrọ ihe ha dị n'ezie. N'ịbụ otu nwanyị na-bụ nnọọ obere nwere ike inyere mmadụ aka na-azụ ya furu efu zest ma nweta ezuru ike ndu na-arụrụ ya; vitality nke ụmụ agbọghọ na o yiri ka na-arụ ọrụ ebube ndị ikom ndị a.
Akpa tọrọ ọtụtụ mgbe ndị inyom na-enyere ụmụ mmadụ hụ ụwa si dị iche iche n'ọnọdụ. Okenye mgbe amalite ikwere na ha hụrụ ezuru. Mgbe ndị ikom ndị a na-amalite na-akpa inyom ukwuu tọrọ ha, ha na-agbasaghị ịzụlite ihe nnọọ ọhụrụ anya. Ha pụrụ ọbụna amalite na-eme ihe na ha adịghị mere tupu.
Ntozu Okè na amamihe nwere ike na-abịa mgbe a na-aghọ onye okenye; nkwupụta guzo ezi ma ikom na ndị inyom. Ọ gaghị ekwe omume adịgboroja ndị a àgwà abụọ. Ọtụtụ mgbe mgbe mbụ ebua bụ ihe karịrị mmekọrịta n'etiti nwoke meworo okenye na a tọrọ nwaanyị amama stale kara aka enweghị okè na amamihe nke ikpeazụ.
Ọ bụrụ na ị ga-esi n'ime a mmekọrịta a nwaanyị ukwuu tọrọ gị, i nwere ike na-esiri ike ime ka ya obi ụtọ na bed n'ihi ya elu mmekọahụ mbanye. Ọtụtụ ndị inyom n'ọnọdụ dị otú ahụ amalite na-achọ ihe ọzọ mmekọahụ onye. Ezie na site n'ime nke a nwanyị nwere ike igbo ya mkpa mmekọahụ, n'ihi na nwoke a àgwà nke ya na ya so na-enwekwu ya Ohere nke na-emepe emepe ebute site ná mmekọahụ.
Mgbe akpa inyom ukwuu tọrọ ha, ndị ikom nwere ike na-esifịna site ya enweghị mmasị na-edinara ala na-eme ka a na ezinụlọ. Taa, na ọtụtụ ndị inyom ha na ufọt ufọt 20s ma ọ bụ obere karịa na-achọ obi ụtọ ná ndụ, nwere zuru okè ọrụ, na irite a otutu ego tupu edinara ala. Dị ka onye na-abụghị na-eto eto ọzọ, otu ga-abụ n'ezie ịhụ ya dị mfe nye ibe ya oge dị ukwuu tupu ịmalite a ezinụlọ.
Dị ka ihe ọ bụla ọzọ mmekọrịta, mmekọrịta n'etiti ndị okenye na ndị tọrọ ndị inyom na-ha kpọkwara na demerits. Ya mere, na-eme ka mmekọrịta dị otú ahụ nke ọma ma mmekọ mkpa ịghọta onye ọ bụla ọzọ nke ọma na-aghaghị ịbụ dakọtara na onye ọ bụla ọzọ.